:: အခန်းကန္ဏ ကစားပွဲ
တစ်ကြိမ် PIN နံပါတ် အတည်ပြုခြင်း
ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ကြိမ် PIN နံပါတ်ထည့်ပါ
နောက်တကြိမ် PIN/ပင်းနံပတ်ကို ပို့ရန် နှိပ်ပါ
အမျိုးအစားများ : ပြိုင်ပွဲ
အရွယ်အစား: : 74.25 MB
ဗားရှင်း : 1.4.8
As always, youâ€™ll have3vehicles to choose from to use to mow down the hordes of zombies. These are the muscle car, the armored humvee, and the school bus. Fans of the zombie-genre will immediately notice recognize these vehicles and the inspiration from them.
ဆာဗာအလုပ်ရှုပ်နေသည် ကျေးဇူးပြု၍ နောက်မှထပ်ကြိုးစားပါ
သင်၏ပယ်ဖျက်သည့်စာရင်းသွင်းမှုမအောင်မြင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ နောက်မှထပ်ကြိုးစားပါ
သင်၏ စာရင်ပေးသွင်းမှုပယ်ဖျက်ခြင်း အပြောင်အလဲအား လုပ်ဆောင်နေပါသည် ကျေးဇူးပြုပြီးခဏစောင့်ပါ။
သင်သည် အောင်မြင်စွာစာရင်းပယ်ဖျက်ပြီးပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။